ငရုတ်စိုက်ပျိုးနည်း - Myanmar Farmers' Portal
Home ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် စားဖိုဆောင်သီးနှံများ ငရုတ်သီး ငရုတ်စိုက်ပျိုးနည်း
တောင်အမေရိကတိုက်၊ အမေရိကအလယ်ပိုင်းနှင့် အပူပိုင်းဒေသများဟု ယူဆသည်။ ဘရားဇီးနှင့် အနီးတ၀ိုက်ရှိကျွန်းများ၊ အနောက်အိန္ဒိယကျွန်းစုတို့အားလည်း မူရင်းဒေသအဖြစ် အချို့က ယူဆသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် မန္တလေးတိုင်း၊ မကွေးတိုင်း၊ ဧရာဝတီတိုင်းနှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းတို့တွင် အများဆုံးစိုက်ပျိုးသည်။
ငရုတ်မျိုးတွင် မျိုးစိတ် ၂-ခု Capsicum annum နှင့် C- frutescens ဟူ၍ ရှိပါသည်။ စိုက်ပျိုးနေသော ငရုတ်အများစုမှာ C-annum တွင် ပါဝင်ပြီး Tabasco အုပ်စုတခုသာလျှင် C- frutescens တွင် ပါဝင်သည်။ Annum မှာ annual ဟူ၍အဓိပ္ပာယ်ရသည်။ သို့သော်လည်း နှစ်ရှည်ခံ Perennial အဖြစ် အပူပိုင်းနှင့် Sub tropic တို့တွင် တွေ့နိုင်သည်။ Frutescens မှာ Shrub ဟူ၍ အဓိပ္ပါယ်ရပြီး Woody plant အဖြစ် အပူပိုင်းဒေသများ Tropical နှင့် Sub tropical ဒေသများတွင် ငရုတ်စပ်အဖြစ် အရေးပါသော သီးနှံဖြစ်သည်။
ငရုတ်စပ် C-frutescensမှာ နှစ်ရှည်ခံပင်ဖြစ်၍ တစ်ခါတရံနှစ်ပင်ခံအဖြစ် စိုက်ပျိုးကြသည်။ C-annum ထက် သက်တမ်းပိုရှည်သည်။ နှင်းဒဏ်မခံနိုင်ပါ။ အပူပိုင်းဒေသတွင်သာ အနီရောင်ရှိသည်။ အနံ့အရသာ ထူးခြားသည်။ အခြားမျိုးများထက်ပိုမိုပူ၍ Chilli ဟု ခေါ်သည်။ Vit-C ပါဝင်မှုတွင် C-annum ထက်ပိုသည်။
၁။ Var minimum
အသီးအပေါ်ထောင်သီးသည်။ နှစ်ရှည်ပင်ခံသည်။ အသီးစုသီးသည်။ အချိန်မရွေးခူး နိုင်သည်။ အသီးပုံအရင်းတုပ်၍ အဖျားရူးသည်။
၂။ Var baccatum
အသီးဝိုင်း၍ အလှအပအတွက် စိုက်ပျိုးသည်။
၃။ Var pubescens
အမေရိကတောင်ပိုင်းတွင် စိုက်ပျိုးသည်။ ပွင့်ချပ်ခရမ်းရောင် ရှိသည်။ အရွက်နူးညံသည်။ အစေ့မှာ အနက်ရောင်ရှိသည်။
မြေသြဇာကြွယ်ပြီး ရေမ၀ပ်သောမြေမျိုး၊သဲနုန်း၊ နုန်းမြေပွမျိုးသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ မြေစေးအသင့်အတင့်ပါသော မြေတွင် လည်း စိုက်ပျိုးနိုင်သည်။သို့သော် ရေမ၀ပ်စေရန် ရေထုတ်မြောင်းများ ပြုလုပ်စိုက်ရမည်။ သဲမြေတွင်စိုက်က သဘာဝမြေသြဇာ လုံလောက်စွာထည့်ပြီးမှ စိုက်ရမည်။ မြေသားပါပြီး အောက်ခံသဲကြပ်သော မြေတွင် စိုက်ပျိုးရန်မသင့်။ မြေသားထုနက်ပြီး ကျောက်စရစ် ကင်းစင်ရန် အထူးလိုအပ်သည်။ အသင့်တော်ဆုံး pH မှာ (၅. ၅ မှ ၇. ၀) ရှိသောမြေဖြစ်သည်။
အပူပိုင်းနှင့် အပူသမပိုင်းသီးနှံဖြစ်သည်။ ပူနွေးစိုစွတ်သော ရာသီဥတုကို ကြိုက်နှစ်သက်သည်။ မိုးရေချိန် ( ၂၅မှ ၅၀) လက်မ ရွာသော ဒေသများတွင် စိုက်ပျိုးရန် ကောင်းမွန်သည်။ မိုးသိပ်များက အသီးပုပ်နိုင်သည်။ မိုးများသော ဒေသများတွင် မိုးနည်းကာလ စိုက်လေ့ ရှိသည်။ အပူပိုင်းဒေသများတွင် အချိန်မရွေး စိုက်နိုင်သည်။ ပူပြင်းသည့်ဒဏ်ကို ခံနိုင်သော်လည်း အသီးဖြစ်ထွန်းမှုနည်းသည်။ အသင့်တော်ဆုံး အပူချိန်မှာ ( ၇၀-၈၀ )ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ဖြစ်သည်။
ပျိုးဘောင်ကို အကျယ်(၃) ပေ၊ အမြင့်(၆)လက်မ၊ အရှည်(၃၀) ပေဘောင်များပြုလုပ်ကာ နွားချေး၊ မြေဆွေးတို့ထည့်ကာ ဘောင်မျက်နှာ ပြင်ညီအောင်ညှိ၍ မျိုးစေ့ကိုပြာ၊ သဲတို့ဖြင့် ရောကာ ညီညာစွာ ခပ်ပါးပါးကြဲပေးခြင်း၊ မျိုးစေ့များခိုင်မာစွာ စွဲကပ်စေရန် လက် (သို့မဟုတ်) ပျဉ်ပြားဖြင့်ဖိပေးခြင်း၊ ကောက်ရိုးပါးပါးအုပ်၍ ရေလောင်းခြင်းနည်းကို သော်လည်းကောင်း၊ ပျိုးဘောင်ပေါ်တွင် ကန့်လန့်ြ့ဖတ် (၃) လက်မခြား မြောင်းများဖော်၍ အစေ့များကို အတန်းလိုက်ချခြင်းနည်းဖြင့် သော်လည်းကောင်း၊ ပျိုးထောင်နိုင်သည်။ တစ်ဧကအတွက် မျိုးစေ့ ( ၂၀၀) ဂရမ် လိုအပ်ပါသည်။
(၇) ရက်မှ ( ၁၀) ရက်အတွင်း အပင်ပေါက်စုံက ကောက်ရိုးဖယ်၍ နံနက်တကြိမ်၊ ညနေတကြိမ် ရေလောင်းပေးရမည်။ မိုးများသောဒေသ ( သို့မဟုတ်) မိုးများသောအချိန် ပျိုးထောင်က အရိပ်လုပ်ပေးရမည်။ ပျိုးပင်များ ( ၃၀ မှ ၄၅) ရက်အတွင်း ရွေ့ပြောင်း စိုက်ပျိုးနိုင်သည်။
မြေတစ်ဧကနွားချေးလှည်း (၂၀) စီးခန့် ထည့်သည်။ တယ်ရေးထွန်ရေး ပြုပြင်ခြင်းသည် အရပ်ဒေသအလိုက် ကွဲပြားမှုရှိသည်။ သုံးသွား ထယ် (၁) စပ်၊ ( ၁၆) သွား (၂) စပ်ကို မြေပေါ်လိုက်၍ အနည်းဆုံးဝင်ပေးသင့်သည်။ အပင်အကွာအဝေးကို (၂) ပေပတ်လည် လေးကွက်ကြား စိုက်နည်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ တန်းကြား (၃) ပေ၊ ပင်ကြား( ၁) ပေခွဲထား၍လည်းကောင်း စိုက်လေ့ရှိပါသည်။
အရပ်ဒေသလိုက်၍ စိုက်ပျိုးနည်း (၂) နည်းရှိပါသည်။
ပျိုးခင်း၊ ပျိုးဘောင်တို့ဖြင့် ပျိုးမထောင်ဘဲ ကြိုက်နှစ်သက်သော ထယ်ရေး၊ ထွန်ရေးရပါက မျိုးစေ့များကို ညီညာစွာ ကြဲပက် စိုက်ပျိုးခြင်း ဖြစ်သည်။ တစ်ဧကမျိုးစေ့ ( ၁၀၀) ဂရမ်ခန့် ကုန်သည်။ အပင်ပေါက်စုံပါက လိုချင်သော အကွာအဝေးထားကာ ကျန်အပင်များနှုတ်ပေး သည်။ မုံရွာ၊ ညောင်ကန်၊ ဘုတလင် တစ်ဝိုက်တွင် အများအားဖြင့်စိုက်ပျိုးကြသည်။
ထယ်ရေးအသင့်ပြင်ထားသော မြေပေါ်တွင် အသင့်မျိုးထားသော ပျိုးပင်များ ပျိုးသက် ( ၃၀- ၄၅) ရက်သားခန့်ရပါက ရွေ့ပြောင်း စိုက်ပျိုးနိုင်သည်။
ရွေ့ပြောင်းစိုက်ပျိုး (၃-၄) ရက်ကြာက အပင်စတင်လန်းလာပါမည်။( ၁၀-၁၂) ရက်ကြာက ပေါင်းနှိမ်ခြင်း၊ ရေသွင်းခြင်း စတင်နိုင် ပါသည်။ ကြားပေါင်းလိုက်ခြင်း၊ မြေတောင်မြှောက်ခြင်း၊ မြေသြဇာ ကျွေးခြင်းကို (၂) ပတ်တစ်ကြိမ်ခန့်ပြုလုပ်ပေးနိုင်သည်။
တစ်ဧကနွားချေးလှည်းအစီး (၁၀-၂၀) စီး ထည့်ပေးနိုင်သည်။ ဓာတ်မြေသြဇာအဖြစ် ယူရီးယား (၁) အိတ်၊ တီစူပါ (၁) အိတ်၊ ပိုတက်ရှ် (၁) အိတ်နူန်းကို မြေပြုပြင်စဉ်တွင် ထည့်၍ အပင်ကြီးထွားစဉ်အဆင့်တွင် ယူရီးယား (၂) အိတ်ကို ထပ်မံကျွေးရပါမည်။ နှမ်းဖတ် တစ်ဧကလျှင် (၀.၅) တန်နူန်းကို ငရုတ်ပင် ပတ်လည်တွင် ထည့်ပေးနိုင်ပါသည်။
ရွေ့ပြောင်းစိုက်ပျိုးပြီး ( ၂) လအကြာတွင် ပန်းစတင်ပွင့်သည်။ ပန်းပွင့်ပြီး (၂) ပတ်အကြာတွင် ပထမအကြိမ် စတင်ခူးဆွတ်နိုင်သည်။ ရွေ့စိုက်ပြီး (၃-၄) လအတွင်း ဆွတ်ခူးနိုင်သည်။ အသီးများ နီရဲလာက လျင်မြန်စွာ ဆွတ်ခူးရသည်။ မှည့်သော အသီးသာခူးသင့်သည်။ စိမ်းသောအသီးခူးပါက ဖလံဖြူ ဖြစ်သွားတတ်သည်။ ငရုတ်သီးအမှည့်ကိုခူးရာတွင် ကြက်တူးရွေးနူတ်သီးနှင့်ကြေးညိုတောင့်ကို မခူးရပါ။ (ငရုတ်သီး ရင့်မှည့်ရာတွင် မှည့်စပြုသောအခါ အစိမ်းတပိုင်း၊ အနီတစ်ပိုင်းအဆင့်ကို ကြက်တူရွေးနူတ်သီးခေါ်၍ ၄င်းအဆင့်ကိုကျော်ကာ ငရုတ်သီးတစ်တောင့်လုံးအညိုပြောင်းက ကြေးညိုတောင့်ဟုခေါ်သည်။) ၄င်းအဆင့် (၂) ဆင့်ကို ကျော်လွန်းပြီးသော အနီရောင်သန်း သည့် ငရုတ်ကိုသာ ခူးရမည်။
ငရုတ်သီးအစိမ်းကိုလည်း ဆွတ်ခူးရောင်ချနိုင်သည်။ တစ်ပိုင်းတစ်စမှည့်သော အသီးနှင့်လုံးဝမှည့်သော အသီးများကိုလည်း ရိတ်သိမ်း ရောင်းချနိုင်သည်။
မျိုးနှင့်မြေအခြေအနေပေါ်မှုတည်၍ အခြောက်တစ်ဧကလျှင် (၁၀၀-၂၀၀) ပိသာရနိုင်သည်။ ငရုတ်သီးအစိမ်းအနေဖြင့် ( ၄၀၀-၁၀၀၀) ပိဿာ ထွက်သည်။
Source by – ဟင်းသီးဟင်းရွက် စိုက်ပျိုးနည်း